LUNGISA I-PLAYSTATION 'IMPAZAMO YENZEKILE' XA UNGENA - ITHAMBILE
Iikhowudi zempazamo ziyaziwa ngokungathandabuzekiyo, kodwa ukungabinayo ikhowudi yempazamo konke konke kunokuba yindlela yomsindo. Kulula ukusombulula ingxaki oyifumene kwikhonsoli yakho okanye kwenye isixhobo ngokhangelo lwewebhu olulula lwekhowudi yempazamo. Kodwa kule meko, akukho lwazi lungako malunga nempazamo olunikiweyo kumsebenzisi.
Impazamo engenagama inokuba lundwendwe oluqhelekileyo kwikhonsoli yakho yePlayStation 4 njengoko iphuma kunye nomyalezo othusayo Impazamo yenzekile kwaye alukho olunye ulwazi. Impazamo ihlala yenzeka xa ubhalisa i-PS4 yakho okanye uzama ukungena kwiprofayili yakho yePSN. Ngamaxesha athile inokubonakala ngelixa utshintsha useto lweakhawunti yakho, kodwa kunqabile kakhulu ngexesha lokudlala.
Kule nqaku, siza kuhamba ngeendlela ezininzi zokusombulula impazamo ye-PlayStation ngaphandle kwekhowudi yephutha.
Uyilungisa njani i-PlayStation Impazamo eyenzekileyo (akukho khowudi yempazamo)?
Indlela yoku-1: Qinisekisa kwaye uhlaziye ulwazi lwakho lweakhawunti yePSN
Indlela yesi-2: Yenza iakhawunti entsha yePSN usebenzisa idilesi ye-imeyile entsha
Indlela yesi-3: Ngena kwiakhawunti yakho usebenzisa ikhonsoli eyahlukileyo
Indlela yesi-4: Guqula ukusetwa kobucala bakho kungabikho 'Mntu'
Indlela yesi-5: Guqula iNkqubo yeDomain Name System (DNS)
Indlela yesi-6: Cima intambo yombane
Indlela yesi-7: Nika amandla okanye unike amandla ukuqinisekiswa kwamanyathelo amabini
Nangona le mpazamo iziva ingacacanga kwaye ingacacanga, kukho iindlela ezimbalwa ezicacileyo nezilula zokwenza ukuba ihambe. Ukwenza iseti yeakhawunti yakho yePSN kuya kwenza ubuqhetseba kuninzi ngelixa abanye banokuzama ukusebenzisa iakhawunti yabo kwikhonsoli eyahlukileyo. Ngokulula ukuvula ikhebula lombane okanye ukutshintsha useto lwe-DNS sisisombululo esisebenzayo. Indlela nganye ekhankanywe apha ngezantsi ilula kwaye iyakhawuleza, ngenxa yoko unokubuyela ngokulula kumdlalo wakho owuthandayo.
Inethiwekhi yePlayStation (PSN) iakhawunti igcina kwaye ivumelanise iinkcukacha zakho kunye nokukuvumela ukuba uthenge kwi-intanethi ukhuphele imidlalo, iimuvi, umculo kunye needemo.
Impazamo inokubangelwa kukuba ukhawuleze ukuqala ukudlala kwikhonsoli esandula kuthengwa ngaphandle kokuqinisekisa iakhawunti yakho yePSN kuqala. Ukuqinisekisa kunye nokuhlaziya ulwazi lweakhawunti yakho kunokuba luncedo ekuthinteleni le khowudi yempazamo kwaye kunceda ukuba ufikelele kwimicimbi ethile yenethiwekhi.
Landela la manyathelo angezantsi wokuhlaziya kunye nokuqinisekisa ulwazi lweakhawunti yakho yePSN ukulungisa lo mbandela.
Inyathelo 1: Kwikhompyuter yakho okanye kwifowuni vula ibhokisi yemeyile yakho ye-imeyile. Qiniseka ukuba ungena kwidilesi enye ye-imeyile ebisetyenziselwa ukuseta iakhawunti yakho yePSN.
Inyathelo 2: Kwibhokisi yakho yebhokisi engenayo, khangela i-imeyile ethunyelwe yi-PlayStation. Unokwenza ngokulula ngokukhangela ‘ Isony ’Okanye‘ Isikhululo sokudlala ’Kwindawo yokukhangela.
Iposi izakucela isiqinisekiso sedilesi ye-imeyile, ukwenza njalo, cofa nje kwikhonkco eliqhotyoshelwe ngeposi. Nje ukuba uqinisekise, akufuneki ufumane le mpazamo kwakhona.
Phawula: Ukuba kudlule ixesha elide okoko kwenziwa iakhawunti yakho yePSN emva koko ikhonkco linokuphela. Kwimeko apho, ungangena kwi IWebhusayithi yePlayStation kwaye ucele ikhonkco elitsha.
Imicimbi kwiseva yeNethiwekhi yePlayStation inokubangela ukuba umsebenzisi angabinakho ukuqinisekisa iakhawunti yakhe. Ukwenza kunye nokungena kwiakhawunti entsha ngokuqinisekileyo kuya kulungisa naziphi na iimpazamo. Ukuba usandula ukuthenga ikhonsoli entsha, oku ngekhe kube yinto enkulu njengoko ungazukuphulukana nayo nayiphi na inkqubela phambili yakho. Qiniseka ukuqinisekisa iakhawunti entsha ngexesha nangokuchanekileyo ngaphambi kokusetyenziswa.
1. Qala iPlayStation yakho kwaye uzulazule uye kwicandelo 'loMsebenzisi omtsha'. Cinezela ' Yenza uMsebenzisi 'Okanye' Umsebenzisi 1 'kwiscreen sokungena kwi-PlayStation. Oku kuyakwenza umsebenzisi wasekhaya kwi-PlayStation uqobo kwaye hayi i-akhawunti yePSN.
2. Khetha ' Okulandelayo 'Kulandelwa' Entsha kwi-PlayStation Network? Dala i-akhawunti'.
3. Ngoku, cofa u ' Bhalisa ngoku '.
4. Ngokucinezela iqhosha 'Tsiba' ungaqhubeka ngqo ukudlala umdlalo ngaphandle kweintanethi. Khumbula, ngokuzulazula kwi-avatar yakho kwiscreen sekhonsoli yakho, ungayibhalisela i-PSN kamva.
irql incinci okanye ayilingani
5. Jonga kwiprofayili yoMsebenzisi 1 ukuba usebenzisa i-PlayStation yakho okokuqala. Uya kudinga ukufaka iinkcukacha zakho ngokuchanekileyo nangokunyanisekileyo, cinezela ' Okulandelayo ’Iqhosha kwiscreen ngasinye esitsha.
6. Ngaphandle kwenkcazelo yobuqu, kuya kufuneka ukuba ufake ukhetho lwakho ukuze useto lweakhawunti yakho lube lolakho. Oku kubandakanya ukwabelana, ukuthumela imiyalezo kunye nokukhethwa kwabahlobo.
7. Ukuba ungaphantsi kwe-18, ke uya kuvunyelwa kuphela ukuba udlale kwimowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi. Udinga imvume kumntu omdala ukwenza imo ye-Intanethi. Sikucebisa ngamandla ukuba ungangeni kumhla wokuzalwa ongachanekanga ukuze ungene kwimowudi ye-Intanethi ukuba usemncinci njengoko kuchasene nokusetyenziswa kwesixhobo.
8. Ukuba ungaphezulu kweminyaka eli-18, ngexa ungena kwindlela yokubhatala, idilesi oyifakileyo kufuneka ifane naleyo ibisetyenziswa kwibhili yekhadi lakho. Oku kuyakuthintela ezinye iimpazamo kunye nemicimbi ekubeni ifike.
9. Ngelixa ufaka idilesi yemeyile yakho qinisekisa ukuba yiyo ongene kuyo, njengoko uza kufumana i- ikhonkco lokuqinisekisa kungekudala . Ukuba awukwazi ukufumana i-imeyile kwiqela le-PlayStation, jonga ugaxekile okanye ifolda ye-junk kube kanye . Fumana iposi ngokuchwetheza u-‘Sony ’okanye‘ iPlayStation ’kwibar yokukhangela. Landela ikhonkco ukwenza ifayile entsha Isazisi esikwi-Intanethi ngokufaka igama lakho kunye nefani. Khumbula, igama liya kuba loluntu kwaye liyabonakala kwabanye.
Ukuba awukwazi ukufumana i-imeyile, khetha ' Nceda ’Ukutshintsha idilesi yemeyile yakho kwakhona okanye ubuze iPlayStation yakho ukuba iphinde ithumele iposi. Khetha ' Ngena nge-Facebook ’Ukudibanisa i-PSN yakho neakhawunti yakho ye-Facebook.
Ukuba uyazi umntu ophethe ikhonsoli ye-PlayStation 4, le ndlela iluncedo. Ukuya lungisa i-PlayStation Impazamo eye yavela, ungene okwethutyana kwikhonsoli yomnye umntu. Unokwabelana ngeenkcukacha zeakhawunti kunye nomhlobo othembekileyo kwaye ubacele ukuba baphume kwezabo kwaye ungene kweyakho okwethutyana.
Sincoma ukuba ubekho ngokwasemzimbeni ngexesha lenkqubo kwaye ungene kwiakhawunti ngokwakho kuba le yeyona ndlela ikhuselekileyo yokuqinisekisa ukuba ulwazi lweakhawunti kunye negama lokugqitha alonakaliswanga. Emva kwethutyana, phuma kwiakhawunti yakho kule konsole kwaye ungene kwikhonsoli yakho kwaye ujonge ukuba uyayilungisa na le ngxaki.
Okucetyiswayo: Iindlela ezi-7 zokuLungisa i-PS4 (i-PlayStation 4) yokuQinisa nokuLamba
Abaphathi beakhawunti banokukhawulela ngokulula indlela ababonakala ngayo kwabanye abasebenzisi beNethiwekhi yePlayStation ngokutshintsha iisetingi zabucala. Esi sisisombululo kuyo yonke iseti yeengxaki kodwa abanye abasebenzisi baxele oku kungalungiswa kokukhoyo ngoku. Ukutshintsha iisetingi zabucala zibe ‘ Akukho namnye ’Kufanelekile ukudutyulwa njengoko oku kunokuwulungisa lo mbandela ngokusisigxina. Le ndlela yokutshintsha isetwe ngokulula kwaye ilula.
1. Vula ikhonsoli yakho kwaye uzulazule uye kwi ‘ Ekhaya ’Imenyu. Cofa kwi icon yegiya ukuvula 'Useto'.
2. Kanye kwimenyu yezicwangciso, cofa kwindawo ethi 'PlayStation Network'. Kwimenyu engaphantsi kokucofa 'kuLawulo lweAkhawunti' emva koko ' Useto lwaBucala '. Apha, kuya kufuneka ufake iphasiwedi yakho ye-PlayStation ID.
3. Nganye nganye ngesandla khetha izinto ongathanda ukuzitshintshela useto lweMfihlo kwaye uzitshintshe zibe ‘ Akukho namnye '. Umzekelo, phantsi 'Ukwabelana ngamava akho' uyakufumana 'Imisebenzi kunye neeNdebe' apho uya kufumana ukhetho lokutshintsha kube ' Akukho namnye '. Kuyafana 'nokunxibelelana nabahlobo' apho unokutshintsha khona useto lube 'ngabahlobo babahlobo', 'izicelo zabahlobo', 'ukukhangela', kunye 'nabadlali onokuthi ubazi'. Qhubeka ngokufanayo 'ngokukhusela ulwazi lwakho', 'ukhetho lwemiyalezo', kunye 'nokulawula uluhlu lwabahlobo bakho'.
4. Ngoku, buyela kwimenyu ephambili kwaye uqalise kwakhona ikhonsoli yakho ye PlayStation ukujonga ukuba uyakwazi na lungisa i-PlayStation Impazamo eyenzekileyo.
Inkqubo yegama leDomain (DNS) isebenza njengencwadi yefowuni ye-intanethi. Sinokufikelela kulwazi olufumaneka kwi-intanethi ngamagama eedomain ahlukeneyo (njengangoku uzakusebenzisa 'ingxaki yokusombulula ingxaki.xyz'). Izikhangeli zewebhu ziyasebenzisana nokusetyenziswa kweedilesi zeProtocol ye-Intanethi (IP). I-DNS iguqulela idomeyini kwiidilesi ze-IP ukuze isikhangeli sakho sikwazi ukufikelela kwi-intanethi kunye nezinye izixhobo ezikwi-Intanethi.
Ukutshintsha kunye nokulungisa uqhagamshelo lwakho lwe-intanethi kunokubamba isitshixo ekuphepheni le mpazamo. Oku kuyakwenza tshintsha idilesi ye-DNS yonxibelelwano lwakho lwe-intanethi kwidilesi evulekileyo ye-DNS eyenziwe nguGoogle ngokukodwa. Oku kunokuwulungisa umba kwaye ukuba awukwenzi, ukukhangela okulula kuGoogle kuya kukunceda ufumane idilesi evulekileyo ye-DNS evulekileyo.
Ukuba ufumana le mpazamo ngelixa uzama ukudlala umdlalo wakho kwaye akukho khowudi yempazamo eyongezelelweyo ecaleni kwawo, indlela edweliswe apha ngezantsi yeyona ndlela yakho yokusombulula umba. Uninzi lwabasebenzisi lufumene esi sisombululo siluncedo kwimidlalo eyahlukeneyo, ngakumbi kwimidlalo efana noTom Clancy's Rainbow Six Siege.
1. Nje ukuba impazamo ivele kwikhonsoli yakho, uye kwimenyu yezicwangciso, kwaye ufumane ukhetho 'kuLawulo lweAkhawunti'. Cinezela 'Sayina uphume' ukuze uphume kwiakhawunti yakho.
2. Ngoku, cima i-PlayStation 4 console yakho ngokupheleleyo.
3. Xa ikhonsoli ivaliwe ngokupheleleyo, ngasemva kwekhonsoli, vula intambo yombane ngobunono.
4. Gcina ikhonkco icinyiwe okwexeshana, imizuzu eli-15 iyakwenza iqhinga. Xhuma intambo yombane ngononophelo kwiPS4 kwaye uyibuyisele umva.
5. Ngena kwiakhawunti yakho kwakhona nje ukuba ikhonsoli iqale kwaye ujonge ukuba uyakwazi na lungisa i-PlayStation Impazamo eyenzekileyo.
Bambalwa abasebenzisi abaye baxela ukuba ukukhubaza kunye nokwenza amandla kwakhona amanyathelo enkqubo yokuqinisekisa ukhuseleko njengesisombululo esifanelekileyo nesilula. Ukuba ayenziwanga isebenze, emva koko yenza ukhetho luyakwenza iqhinga.
Inkqubo yokuqinisekisa enamanyathelo amabini ikhusela umsebenzisi ekungeneni okungafunekiyo ngokuqinisekisa ukuba nguwe kuphela onokufikelela kwiakhawunti yakho kwinethiwekhi yePlayStation. Ngokusisiseko, ngalo lonke ixesha kufunyanwa ukungena ngemvume okusha kwinkqubo yakho, uya kufumana umyalezo obhaliweyo onekhowudi yokuqinisekisa eya kungeniswa ngelixa uzama ukungena ngemvume.
Funda kwakhona: Uyitshintshela njani iOfisi yeMicrosoft kwiKhompyuter entsha?
Unxibelelwano lwendawo yengingqi alunaso uqwalaselo olusebenzayo lwe-ip
Inkqubo yokutshintsha useto lokuQinisekiswa kwamanyathelo ama-2 kulula, landela nje indlela ekhankanywe apha ngezantsi.
Inyathelo 1: yiya kwi ' Ulawulo lweAkhawunti ’Iinketho kwimenyu yezicwangciso. Cofa ku 'Ulwazi lweAkhawunti' emva koko 'Ukhuseleko' kwimenyu engaphantsi. Ukuba sele inikwe amandla, cofa kwindawo ethi 'Isimo', kwaye kwimenyu ehlayo, khetha 'Engasebenziyo' emva koko 'Qinisekisa'. Qala kabusha isixhobo kwaye usivumele kwakhona.
Inyathelo 2: Ngena ngolwazi lweakhawunti yakho (ukuba awukabinayo). Khangela i ‘ Cwangcisa ngoku 'Ebekwe phantsi' kokuQinisekiswa kwamaNyathelo ama-2 'kwaye ucofe kuyo.
Inyathelo 3: Kwibhokisi ephumayo, ngenisa inombolo yakho yeselfowuni ngononophelo kwaye ucinezele ‘ Yongeza '. Nje ukuba inombolo yakho yongezwe, uya kufumana ikhowudi yokuqinisekisa kwifowuni yakho. Faka le khowudi kwiscreen sakho sePS4.
Inyathelo 4: Okulandelayo, uya kusayinwa uphume kwiakhawunti yakho kwaye ufumane isiqinisekiso isikrini. Funda ulwazi olukwiskrini kwaye ujonge indlela yakho eya phambili. Emva koko, cofa 'KULUNGILE' .
i-err_connection_itimed_out windows 8
akukho sandi emva windows 10 hlaziya
Iifoto zohlelo lokusebenza lokuwa kweewindows 10
Awunakho ukulungisa isisombululo sescreen